Fahasalamana: vokatry ny pôrnôgrafia | Valin'ny Fanamarinana
Home fahasalamana Fiantraikan'ny pôrnôma
Ny areti-mandringana Covid-19 dia midika fa mijaly amin'ny fihenjanana bebe kokoa ny olona manerantany noho ny fiovana sy ny tsy fahatokisana ateraky ny virus amin'ny fiainantsika andavanandro. Betsaka no mitodika amin'ny pôrnôgrafia mba hampitony ny fanahiany na ny fahaketrahany, na mahita fahafinaretana haingana fotsiny. Ny indostrian'ny pôrnôgrafia mitentina miliara dolara dia manararaotra olona marobe mahatsapa ho leo rehefa mijanona ao an-trano ary manome fidirana maimaim-poana amin'ireo tranonkala premium hamporisihana ny fampiasana. Ny fanamby ao dia ny fanamboarana haingana dia matetika manana risika miafina, toy ny fiankinan-doha miandalana izay mety hiteraka fampiasana olana ary koa fiankinan-doha ho an'ny sasany. Ireto pejy manaraka ireto dia hanampy anao hahafantatra bebe kokoa ny loza mety hitranga sy ny zavatra azonao atao hampiasa rafitra miatrika tsara kokoa amin'izao fotoana izao. Ny zavatra farany ilainao dia ny fihenjanana adin-tsaina sy tsy fahazoana aina izay azonao nosorohana tamina fampahalalana mahasoa vitsivitsy mialoha.
Ireto misy teny nindramina roa ilaina hodinihina rehefa misaintsaina ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny fahasalamana ara-tsaina:
"Amin'ireo hetsika rehetra amin'ny Internet, ny pôrnôgrafia dia manana ny fikafika mety hitranga," hoy ny nerlandista mpandinika ny fahasalamana Meerkerk et al. 2006
“Miova ny fiainanao rehefa manana fahalalana miasa momba ny atidohanao ianao. Mialà amin'ny fahatsapana ho meloka amin'ny fampitahana rehefa tsapanao fa misy fototra biolojika amin'ny olana ara-pihetseham-po sasany, "hoy ny mpitsabo aretin-tsaina Dr John Ratey, (P6 Fampidirana ny boky" Spark! ").
Alohan'ny handinihantsika amin'ny antsipiriany kokoa ny vokatry ny fampiasana sary vetaveta rehefa mandeha ny fotoana, dia tadidio ny antony maha-zava-dehibe ny fanamby azy io. Ny pôrnôgrafia amin'ny Internet dia manakana ny faniriana sy fahafaham-po amin'ny tena fiainana, ny firaisana ara-nofo. Loza izany satria ny fitiavana sy ny firaisana ara-nofo dia iray amin'ireo traikefa tsara indrindra azontsika olombelona.
Mianatra momba ny vokatry ny pôrnôgrafia
Ity fianarana momba ny vokatry ny pôrnôgrafia ao amin'ny ati-doha ity no zava-dehibe indrindra manampy ny olona handresy ny karazan-tsain-dratsy sy ara-batana ratsy amin'ny fampiasana sary vetaveta be loatra. Hatreto dia misy ny vita Fianarana 85 izay mampifandray ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-pihetseham-po amin'ny fampiasana sary vetaveta. Ireo vokatra ireo dia miainga avy amin'ny zavona amin'ny ati-doha sy ny fanahiana ara-tsosialy ka hatramin'ny fahaketrahana, sary ratsy amin'ny vatana ary fihemorana. Ny tsy fihinanan-kanina, ny firongatry ny tanora dia miteraka fahafatesan'olona betsaka noho ny aretina ara-tsaina hafa. Ny pôrnôgrafia dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fiheverana endrika sary amin'ny vatana.
Na ny fampiasana sary vetaveta adiny telo isan-kerinandro aza dia mety hiteraka zavatra mahamarika fampihenana resaka volo fotsy amin'ny faritra lehibe ao amin'ny ati-doha. Rehefa tafiditra ny fifandraisana amin'ny ati-doha dia midika izany fa misy fiatraikany amin'ny fitondran-tena sy ny toe-po. Ny fisotroan-dronono matetika amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet dia mety hahatonga ny mpampiasa sasany hanana olana ara-pahasalamana, fampiasana an-tery, ary fiankinan-doha mihitsy aza. Manelingelina be ny fiainana andavanandro sy ny tanjon'ny fiainana ireo. Matetika ireo mpampiasa dia miresaka momba ny fahatsapana ho 'moana' amin'ny fahafinaretana andavanandro.
Jereo ity horonantsary 5 minitra ity a manazava ny fiovan'ny atidoha. Ity misy a rohy amin'ny fikarohana sy fandalinana lehibe momba ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-pihetseham-po ratsy kokoa, ary ny valiny (fisainana) mahantra kokoa. Ireo vokatra ireo dia misy fiatraikany amin'ny fahafahan'ny mpampiasa mahatratra tsara any an-tsekoly, amin'ny oniversite na amin'ny asa. Zahao ny MAIMAIMPOANA lesona planina ho an'ny sekoly mba hanampiana ny mpianatra hahafantatra ny vokatry ny fahasalamana ara-tsaina amin'ny pôrnôgrafia amin'ny fahasambaran'izy ireo sy ny fahombiazany any an-tsekoly.
Na dia mety mitarika olana ara-pahasalamana aza ny filan'ny pôrnôgrafia rehefa mandeha ny fotoana, ny olona sasany dia nijaly trauma tamin'ny fiainany ary nampiasa pôrnônika hampitony tena. Amin'ireny tranga ireny dia mila fanampiana ny olona mba hifandray amin'ny vatany indray mba hanampiana azy ireo hitantana ilay hetsika mampivadi-po izay mitazona azy ireo ho voafandrika amin'ny fomba fiasa tsy mendrika. Izahay dia manoro hevitra ny boky nosoratan'ny mpitsabo sy mpitsabo aretin-tsaina momba ny fikarohana, Profesora Bessel van der Kolk, “Ny vatana mitazona ny isa”Miorina any Etazonia. Misy video tsara miaraka aminy ao amin'ny YouTube miresaka momba ny karazana trauma sy karazana trauma (limbic limbic) fitsaboana mahomby izany. Amin'ity iray ity dia mamporisika ny herin'ny ny yoga toy ny iray fitsaboana toy izany. Amin'ity fohy ity dia miresaka izy manirery ary mamoaka aretin-tsaina mahatsiravina. Eto izy miresaka trauma sy firaiketam-po. Ity dia mifandraika amin'ny trauma izay tsapan'ny olona maro noho ny areti-mifindra, COVID19. Feno torohevitra feno fahendrena.
Ny lisitra eto ambany dia mamaritra ny fiantraikany lehibe hitan'ny matihanina amin'ny fahasalamana sy ny fanarenana ireo mpampiasa ny tranonkala fanarenana NoFap ary RebootNation. Marobe ireo soritr'aretina izay tsy voamarina mandra-pialan'ny mpampiasa iray mandritra ny herinandro vitsivitsy.
Ny fahazarana mamoafady dia mety hiteraka olana manaraka:
Ny lisitra etsy ambony dia namboarina avy amin'ny boky "The Porn Trap”Nataon'i Wendy Malz. Jereo eto ambany noho ny fanohanana fikarohana.
"Hafanan'ny fotoana fohy" sy ny heloka bevava amin'ny firaisana
Amin'ity fikarohana mahavariana ity "Ny hafanan'ny fotoana: ny vokatry ny filan'ny nofo amin'ny fanapahan-kevitra“, Ny valiny dia mampiseho fa“ ny fahasarotan'ireo hetsika dia manondro ny fientanam-po amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo ho toy ny fanamafisam-peo isan-karazany ”amin'ny zatovolahy…
“Ny fiheverana faharoa an'ny zavatra hitanay dia ny fahitan'ny olona ny fiatraikan'ny filan'ny nofo amin'ny fitsarany sy ny fitondran-tenany manokana. Ny fankasitrahana ambanin-javatra toy izany dia mety ho zava-dehibe amin'ny fanapahan-kevitry ny tsirairay sy ny fiaraha-monina.
“… Ny fomba tena mahomby amin'ny fifehezan-tena dia mety tsy ny finiavana (izay naseho fa tsy dia misy vokany), fa kosa ny fanalavirana ireo toe-javatra izay hahatonga ny olona iray ho taitaitra ary tsy hahafehy azy intsony. Ny tsy fankasitrahana ny fiantraikan'ny filan'ny nofo amin'ny fitondran-tena manokana dia mety hitarika fepetra tsy ampy hanalavirana toe-javatra toy izany. Toy izany koa, raha tsy takatry ny olona ny fahafahany manao firaisana, dia mety tsy hitandrina izy ireo mba hamerana ny fahavoazana mety hitranga amin'ny fihaonana toy izany. Ny zatovo iray izay mamihina ny hoe '' miteny fotsiny hoe '', ohatra, dia mety hahatsapa fa tsy ilaina ny mitondra fimailo amin'ny daty iray, ka tena mampitombo ny mety hitoe-jaza na ny fifindran'ny STD raha sendra tratry ny hafanana izy. amin'izao fotoana izao. ”
“Ny lojika mitovy amin'izany dia mihatra amin'ny tsirairay. Raha mitsara ny mety ho fihetsiky ny hafa ny olona mifototra amin'ny fandinihana azy ireo rehefa tsy taitra ara-nofo izy ireo, ary tsy mankasitraka ny fiantraikan'ny filan'ny nofo, dia mety ho gaga izy ireo amin'ny fihetsiky ny hafa rehefa taitra izy. Ny lamina toy izany dia mety hanampy amin'ny fanolanana daty. Izy io dia mety hiteraka toe-javatra ratsy izay olona tsy dia liana firy amin'ny datin'izy ireo no tena iharan'ny fanolanana amin'ny daty satria satria tsy mihambahamba izy ireo dia tsy mahatakatra na maminavina ny fihetsiky ny olona iray hafa (taitra). ”
“Raha fintinina, ny fanadihadiana natao dia mampiseho fa ny filana ara-nofo dia mitaona ny olona amin'ny fomba lalina. Izany dia tsy tokony hahagaga ny ankamaroan'ny olona izay manana traikefa manokana amin'ny filan'ny nofo, fa ny haben'ny vokany kosa dia mahavariana. Amin'ny ambaratonga azo ampiharina, ny valiny dia manome soso-kevitra fa ny ezaka hampiroboroboana ny firaisana ara-etika azo antoka sy ara-etika dia tokony hifantoka amin'ny fanomanana ny olona hiatrika ny '' hafanan'ny fotoana '' na hisorohana izany raha toa ka mety hitarika ho amin'ny fitondran-tena manimba tena izany. Ezaka amin'ny fifehezan-tena izay misy manta tsitrapo (Baumeister & Vohs, 2003) dia toa tsy mahomby manoloana ireo fiovana mampihetsi-po sy mandrisika ateraky ny fanentanana. ”
Jereo ny lahatenin'i TEDx nataon'i Dan Ariely ao amin'ny Self Control.
Fiankinan-doha - vokatry ny torimaso, ny asa, ny fifandraisana
Ny fiantraikany indrindra amin'ny fijerena sary vetaveta amin'ny Internet na ny filokana dia ny fiantraikan'ny torimaso. Nifarana ny 'wired sy reraka' ny olona ary tsy afaka mifantoka amin'ny asa ampitso. Ny fikorontanana tsy an-kiato sy ny fitadiavana an'io valim-pitiavana dopamine io dia mety hiteraka fahazarana lalina izay sarotra mandona. Mety hiteraka fandalinana 'pathological' amin'ny endrika fiankinan-doha. Amin'izay fotoana izay ny mpampiasa dia manohy mitady zavatra na hetsika na eo aza ny voka-dratsy - toy ny olana any am-piasana, ao an-trano, amin'ny fifandraisana sns. Ny mpampiasa tsy an-kijanona dia miaina fihetseham-po ratsy toa ny fahaketrahana na ny fahatsapana ho tsy misy dikany rehefa tsy tratrany ilay olana na fientanam-po. Izy io dia mamerina azy ireo miverimberina hanandrana sy hamerina amin'ny laoniny ny fahatsapana hafahafa. Ny fiankinan-doha dia afaka manomboka rehefa miezaka hiatrika izany adin-tsaina, fa mahatonga ny mpampiasa iray koa hahatsapa ho adin-tsaina koa. Fotoam-pamonoana mahatsiravina izany.
Rehefa tsy mahay mandanjalanja ny biolojika anatiny, ny atidohantsika mirindra dia manandrana mandika izay zavatra mifototra amin'ny traikefa teo aloha. Ny dopamine ambany sy ny fihenan'ny neurochemical mifandraika amin'izany dia mety hiteraka fahatsapana mahafinaritra. Anisan'izy ireo ny fahasosorana, ny hanoanana, ny adin-tsaina, ny harerahana, ny angovo mora, ny hatezerana, ny faniriana, ny fahaketrahana, ny fahatsiarovana ary ny tebiteby. Ny fomba amaritantsika ny 'fihetseham-pontsika sy ny antony mety mahatonga ny fahoriam-panahy dia misy fiantraikany amin'ny fitondran-tenantsika. Tsy mandra-pialan'ny olona akory ny pôrnôgrafy fa tsapan'izy ireo fa ny fahazaran'izy ireo no miteraka tsy firaharahiana be loatra eo amin'ny fiainany.
Matetika isika mikatsaka ny fihetseham-po ratsy amin'ny tenantsika sy ny fitondran-tena tiantsika indrindra. Izahay dia manao izany nefa tsy takatsika hoe mety ho tafahoatra ny tsy fahazakan-tena amin'ny fitondran-tena na zavatra izay nahatonga ny fahatsapana ho ambany aloha. Ny fiatra hangover dia rebound neurochemical. Any Skotlandia, ny olona mpisotro alikaola dia mijaly mafy amin'ny andro manaraka dia matetika mampiasa fomba malaza. Izy ireo dia miresaka hoe maka ny "volon'ilay alika kely iny". Midika izany fa manana fisotroana hafa izy ireo. Mampalahelo fa misy olona sasany, mety hiafara amin'ny fihodinan'ny fivarotan-tena, fahaketrahana, fanararaotana, fahaketrahana sy ny sisa.
Pôrnôgrafia be loatra…
Ny fiantraikan'ny fijerena sary be loatra sy manaitaitra be loatra dia mety hitarika ho amin'ny fiantohana sy ny soritr'aretina koa. Mety ho sarotra ny mahita ny fisotroan'ny pôrnôgrafia sy ny fametrahana zava-mahadomelina dia misy fiantraikany mitovy amin'ny atidoha, saingy mihatra izany. Ny atidoha dia mamaly ny manaitaitra, simika na raha tsy izany. Na izany aza, tsy mijanona eo amin'ny hangover ny fiantraikany. Ny fisalasalana tsy miovaova io fitaovana io dia afaka mamokatra fiovan'ny atidoha miaraka amin'ny vokatr'izany:
Mpiara-miasa eo amin'ny mpifankatia
Ny fikarohana dia mampiseho fa ny fandaniana ny sary vetaveta dia mifanitsy amin'ny a tsy fahampian'ny fanoloran-tena amin'ny mpiara-dia aminy. Ny fahazarana amin'ny zava-baovao tsy mitsaha-mitombo sy mihamitombo atolotry ny pôrnôgrafia ary ny fieritreretana fa mety misy olona 'mafana' kokoa amin'ny horonantsary manaraka, dia midika fa tsy voataon'ny mpiara-miasa amin'ny fiainana intsony ny ati-dohan'izy ireo. Afaka manakana ny olona maniry hampiasa vola amin'ny fampiroboroboana ny tena fiainana fifandraisana. Izany dia miteraka fahantrana saika ho an'ny olona rehetra: ny lehilahy satria tsy mandray soa avy amin'ny hafanana sy ny fifandraisana misy eo amin'ny fifandraisana tena izy; ary ny vehivavy, satria tsy misy fampivoarana kosmetika afaka mitazona ny lehilahy liana iray izay voafehy ny ati-dohany mila zava-baovao sy ambaratonga fanentanana tsy voajanahary. Toe-javatra tsy handresy izany.
Ireo Therapiste koa dia mahita fitomboan'ny olona mitady fanampiana amin'ny fiankinan-doha amin'ny fampiharana mampiaraka. Ny fampanantenana sandoka foana zavatra tsara kokoa miaraka amin'ny tsindry na swipe manaraka, dia manakana ny olona hifantoka amin'ny fahazoana olona tokana.
Ao amin'ny fandinihana ny lehilahy amin'ny anjerimanontolo, fahasarotana amin'ny asa sosialy Nihanitombo ny fihenanam-pitenenana. Izany dia nampiharina tamin'ny olana ara-psikolojika toy ny fahaketrahana, ny tebiteby, ny adin-tsaina ary ny fihenan'ny asa sosialy.
• Ny fandalinana ny lehilahy koreanina nahita fianarana tao amin'ny 20 dia hita safidy iray amin'ny fampiasana pôrnôgrafia hahatratrarana sy hihazonana fientanam-po. Hitan'izy ireo fa mahaliana kokoa noho ny fanaovana firaisana amin'ny mpiara-miasa.
Ny fampiasana ny sary vetaveta dia naseho tamim-pahatsorana dia hampihena ny fahafahan'ny olona iray hanemotra ny fahafaham-po noho ny valisoa hoavy sarobidy kokoa. Amin'ny teny hafa, ny fijerena sary vetaveta dia mahatonga anao tsy dia lojika ary tsy mahavita mandray fanapahan-kevitra izay miharihary amin'ny tombotsoanao manokana toy ny fanaovana enti-mody sy ny fianarana aloha fa tsy ny fialamboly fotsiny. Ny fametrahana ny valisoa alohan'ny ezaka.
• Tamin'ny fandalinana ny zatovolahy 14 taona, ny lanjan'ny sary vetaveta amin'ny Internet dia nitarika ho amin'ny mety hiteraka fahombiazana amin'ny akademika, miaraka amin'ny vokatra hita enim-bolana taty aoriana.
Arakaraka ny fijerin'ny lehilahy vetaveta…
Arakaraka ny nijerena azy ny lehilahy iray, dia angamba ny hampiasana azy mandritra ny firaisana. Afaka manome azy ny faniriana ny hizara rakitsoratra pôrnôgrafia miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy, dia mamela soritra sary momba ny sary vetaveta nandritra ny firaisana ara-nofo mba hihazonana ny fananganana. Izany koa dia miteraka ahiahy mikasika ny fahatsapany ara-nofo sy ny sarin'ny vatana. Ankoatra izany, ny fampiasana sary vetaveta avo lenta dia tsy mifanentana amin'ny fankafizana ny fihetsika amam-pitondran-tena miaraka amin'ny mpiara-miasa.
Ao anatin'ny fanadihadiana iray, ny mpianatra amin'ny faran'ny ambaratonga faharoa dia nitatitra ny fifamatorana mafy eo amin'ny alàlan'ny fanjifàna sary vetaveta sy ambany faniriana ara-nofo. Ny ampahefatry ny mpividy ara-dalàna ao amin'ity vondrona ity dia nitatitra fa ny valin'ny faniriana ara-nofo tsy voaaro.
• Ny Fikarohana 2008 momba ny Sexuality Frantsa nahita fa ny 20% ny lehilahy 18-24 dia "tsy liana amin'ny firaisana ara-nofo na ny fanaovana firaisana ara-nofo". Tena mifanohitra amin'ny feon'ny Frantsay izany.
• Ao Japana amin'ny 2010: governemanta ofisialy iray fanadihadiana nahita fa ny 36% lahy lahy 16-19 dia "tsy liana amin'ny resaka firaisana ara-nofo na tsy manisy ratsy azy". Aleony saribakoly virtoaly na angano.
Morphing filan'ny nofo…
Amin'ny olona sasany, mety hisy zavatra tsy ampoizina mozika mahatsiravina izay mifamadika rehefa mijanona mampiasa porno izy ireo. Eto ity resaka ity dia olona mivantana mijery pôrnôgrafia miray, mijery gony mahitsy ary maro be ny karazany. Ny olona sasany dia mamolavola ny filàna sy ny mahaliana amin'ny zavatra ara-nofo tsy lavitra ny fironana ara-nofo voajanahary. Tsy maninona izay foto-kevitray na ny maha-izy antsika. Ny fanararaotana tafahoatra amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet dia mety hiteraka fiovana lehibe amin'ny atidoha. Manova ny rafitry ny atidoha sy ny fiasa izy io. Koa satria tsy manam-paharoa ny rehetra dia tsy sarotra ny milaza hoe firy ny porno dia ampy ho an'ny fahafinaretana fotsiny alohan'ny hanombohany mahatonga fanovana. Ny fanovana ny tsiron'ny firaisana ara-nofo dia midika ho toy ny fiovana eo amin'ny atidoha. Samy hafa ny fihetsik'ireo atidoha tsirairay.
Jereo ny faritra misy anay Miala amin'ny Porn ho an'ny fanampiana sy soso-kevitra maro.
<< Fandanjana sy fifandanjana Vokany ara-batana >>